को हुन् एक करोड ८५ लाख रुपैयाँ तलब पड्काउने गरी जागीर शुरु गरेकी शर्मा ?::सुनौलो न्यूज
को हुन् एक करोड ८५ लाख रुपैयाँ तलब पड्काउने गरी जागीर शुरु गरेकी शर्मा ?
सुनौलो नेपाल – भारतको बिहारको राजधानी पटनामा जन्मेकी मधुमिता शर्मा अहिले भारतमा सर्वाधिक चर्चामा छन् । कारण उनी विश्वकै सर्वाधिक खोजी हुने सर्च इन्जिन गुगलले वार्षिक एक करोड ८५ लाख रुपैयाँ तिर्नेगरी कम्पनीमा भित्र्याएकाे छ।
उमेरले २५ वर्ष पुगेकी उनलाई निकै अाकर्षक तलब सुबिधा सहित गुगलले भित्राएपछी उनको चर्चा सर्वाधिक हुन् थालेको छ । नेपाल, भारत वा दक्षिण एशियामा याे उमेरका केटीहरूले याे तलब कल्पनासम्म गर्न गाह्राे पर्छ।
सोमबार उनलाई उक्त तलब प्याकेजमा गुगलले स्विट्जरल्यान्डकाे जुरिखस्थित कार्यालयमा टेक्निकल सोलुसन इन्जिनियरको रुपमा नियुक्त गरेको हो। गुगलमा काम सुरु गर्नुअघि उनी बेङ्गलुरुमा एपीजी कम्पनीमा थिइन्। उनका पिता सुरेन्द्रकुमार शर्माकाअनुसार पछिल्ला दिनहरुमा मधुमितालाई अम्याजन, माइक्रोसफ्ट एवं मर्सिडिजसहितका कम्पनीहरुले अफर गरेका थिए।
सुरुमा उनलाई इन्जिनियरिङ पढाउन तयार थिएन। आज उनी छोरीको सफलताको उत्सव मनाइरहेका छन्। ‘सुरुमा मैले भनेको थिएँ इन्जिनियरिङको फिल्ड केटीहरुका लागि होइन। पछि धेरै केटीहरु यो फिल्डको अध्ययनमा भएकाे देखेँ र तत्कालै भर्ना गरिदिएँ उनका बाबु अहिले भन्छन ।’
देवर भाउजुको बारम्बारको यौन लिला दाजुले थाहा पाएपछि…….
विमान दुर्घटना हुँदा एक सय भन्दा धेरैको मृत्यु, तीन जनाको जीवितै उद्धार
भारत र पाकिस्तानको सिमानामा दुई देशका सेनाबीच भिडन्त